Joon अनलाइन l होम - एक व्यक्तिगत वित्त साइट। अझै सिक
Olymp Trade रणनीति
Olymp Trade गाइड
5 नयाँ किताबको रूपमा पढ्नको लागि फोरक्सको बारेमा उत्तम पुस्तकहरू Trader
२०२० का लागि XM सेमिनारहरू पुस्तक सीटमा एक वास्तविक ट्रेडिंग खाता दर्ता गर्नुहोस्
XM MT4 | कसरी आफ्नो स्मार्टफोन मा पैसा ट्रेडिंग विदेशी मुद्रा बनाउने
XM विदेशी मुद्रा १० औं वार्षिकोत्त्व प्रोमो | पुरस्कारमा वोन हुन $ १,००,००० सम्म
पाठ - - बुझ्ने फोरेक्स आधारभूत | धेरै के हो?
पाठ - - बुझ्ने फोरेक्स आधारभूत | पिप भनेको के हो?
पाठ | | केन्या मा पैसा ट्रेडिंग विदेशी मुद्रा कसरी बनाउने | एक्सएम फोरेक्स
पाठ २ - शुरुवातकर्ताहरूको लागि ट्रेडिंग | के हो Tradeफोरेक्समा d?
कसरी सिक्नुहोस् Trade विदेशी मुद्रा - पाठ १, फोरेक्स भनेको के हो?
IQ विकल्प ट्यूटोरियलहरू
लग - इन Olymp Trade
Olymp Trade इन्डोनेशिया
Olymp Trade भियतनाम
Olymp Trade ब्राजिल
१००% जम्मा को लागि बोनस रेजिष्ट्रेसनको समय भित्र
प्रयास Olymp Trade
* * जोखिम चेतावनी: विदेशी मुद्रा र FTT ट्रेडिंग तपाईंको निवेश पूंजी को लागी महत्वपूर्ण जोखिम शामिल।
यहाँ को लागी एक साधारण ट्रेडिंग रणनीति छ Olymp Trade Newbies।
तपाईं ओलम्प व्यापार मा एक नयाँ व्यापारी हुनुहुन्छ? के तपाई पैसा कमाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ तर हरेक पटक तपाईले ...
MACD व्यावसायिक रणनीति | यस ट्रेडिंग रणनीति को प्रयोग गरी तपाईको खातालाई डबल गर्न Olymp Trade
The MACD professional trading strategy is based onacombination of the MACD oscillator, the…
द्रुत मोड ट्रेडिंग रणनीति | Stochastic, Parabolic SAR र WMA को यो कम्बो प्रयोग गरी लगातार नाफा कमाउँनुहोस् Olymp Trade
What is Quick Turn? “Quick turn” isacounter-trend strategy for trading. It works best…
कसरी आफैंको पैसा बेच्ने फोटोहरु बनाउन
सेप्टेम्बर 21, 2020
के तपाइँ एक तस्बिर लत हुनुहुन्छ र कसरी आफैंको फोटो बिक्रि गर्ने पैसा कमाउने बारेमा अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ? स्वागतम्। मा ...
२०२० मा कसरी छिटो पैसा कमाउने
सेप्टेम्बर 20, 2020
आजको गाईडमा, मँ तपाईंलाई २०२० मा कसरी पैसा छिट्टै कमाउने भनेर देखाउँछु। यसले केही फरक पार्दैन कि…
कसरी Trade नैरोबी स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) मा।
नैरोबी स्टक एक्सचेन्ज (NSE) केन्या मा आधारित शेयर र बॉन्ड को लागी एक शीर्ष अफ्रीकी विनिमय हो…।
7 उत्तम छोटो अवधि ट्रेडिंग रणनीति को प्रयास गर्न को लागी Olymp Trade
के तपाई मा व्यापारी हुनुहुन्छ? Olymp Trade? के तपाई ट्रेडिंग गर्ने बित्तिकै छोटो देखि लामो पोष्टहरू चाहानुहुन्छ? त्यसो भए संभावना ...
अस्थिर बजारहरूको लागि for उत्तम ट्रेडिंग रणनीतिहरू।
अस्थिर बजार ती बजारहरू हुन् जहाँ मूल्य बढ्दछ र छिटो र तीव्र रूपमा झर्दछ। त्यसको मतलब…
सानो खाताको लागि Best उत्तम ट्रेडिंग रणनीति।
के तपाइँसँग छ वा सानो फोरक्स वा फिक्स्ड समय ट्रेडिंग खाता राख्नु भएको छ? के तपाई सोचिरहनु भएको छ जुन…
7 उत्तम दिन ट्रेडिंग रणनीतिहरू जुन काम गर्दछन्।
यदि तपाईं एक दिन व्यापारी हुनुहुन्छ भने, तपाईं दिन ट्रेडिंग रणनीतिहरू खोजिरहनु पर्छ जुन काम गर्दछ। तर तपाइँको खोज ...
गैर दिशात्मक रणनीतिहरूको साथ पैसा कसरी बनाउने
सेप्टेम्बर 9, 2020
गैर दिशात्मक रणनीतिहरू के हुन्? गैर दिशात्मक रणनीतिहरू तटस्थ रणनीतिहरू हुन् कि होइनन्…
कसरी Trade मा सूचक बिना Olymp Trade १ मिनेट रणनीति।
यसलाई संकेतकहरू, सators्केतकहरू, तर के तपाईंले आफैलाई सोध्न रोक्नुभयो, “के मैले वास्तवमै प्रयोग गर्नुपर्छ ...
कसरी Trade केन्यामा स्टक अनलाइन।
स्टकहरू एक कम्पनीको सेयरको संग्रह हो। र सेयरहरू कम्पनीको पूंजीको एकाई हुन्। A…
कसरी Trade ईथरम इन Olymp Trade.
सेप्टेम्बर 8, 2020
इथरियम भनेको के हो? Ethereum एक cryptocurrency हो। र एक cryptocurrency एक डिजिटल सम्पत्ति डिजाइन गरिएको छ ...
कुनै अघिल्लो अनुभव बिना पैसा व्यापार विदेशी मुद्रा कसरी बनाउने।
सेप्टेम्बर 1, 2020
विदेशी मुद्रा मुद्रा बनाउन तपाई गुरु हुनु पर्छ? क्रमबद्ध गर्न को लागी तपाईसँग धेरै संख्यामा अनुभव हुनु पर्छ
कसरी भारत मा पैसा व्यापार litecoin बनाउन।
लाईटेकोइन भनेको के हो? Litecoin एक क्रिप्टोकरन्सी जुन पछिल्ला विगतमा धेरै लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ।
कसरी तपाईंको ट्रेडिंग इनकम बढाउने Olymp Trade.
अगस्ट 28, 2020
तपाईं दैनिक व्यापारमा कति पैसा कमाउनुहुन्छ Olymp Trade? $ १०, $ १००, $ १०००, नाम दिनुहोस् ... कति ...
का लागि उत्तम ट्रेडि Time समय छनौट गर्दै Olymp Trade भारत।
के तपाईं मुद्रामा कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ? Olymp Trade भारत? त्यसोभए तपाईंले देख्नु भएको हुन्छ कि सबै मुद्राहरू…
Joon.co.ke । An प्रतिष्ठित ब्रोकर पत्ता लगाउन सजिलो तरीका
Joon.co.ke मा स्वागत छ। हामी सबैको लागि सर्वाधिक माग गरिएको ब्रोकर तुलना साइट हो Fओरेक्स र निश्चित समय Trades (FTTs) in एशिया र अफ्रिका.
हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईंलाई उत्तम अनलाइन ट्रेडिंग साइटहरू परिचित गर्नु हो जुन नियमित छ, एक मित्रवत ईन्टरफेस छ, र एशिया र अफ्रिकाका ट्रेडिंग फ्यानहरूको लागि सबैभन्दा आकर्षक बोनस प्रस्तावहरू छन्।
हाम्रो साइट मा तपाईं पाउनुहुनेछ:
पूर्ण अनलाइन ट्रेडिंग समीक्षा।
तपाईको मनपर्ने ट्रेडिंग प्लेटफर्मका लागि उत्तम व्यापार रणनीति।
प्राविधिक विश्लेषण उपकरण प्रयोग गर्नका लागि गाईड गर्दछ।
तपाइँको मनपर्ने अनलाइन ब्रोकर प्रयोगको लागि ट्यूटोरियल
र, सामान्य विदेशी मुद्रा शिक्षा।
1 १००% जम्मा को लागि बोनस रेजिष्ट्रेसनको समय भित्र
: MT4 एकीकरण
: सबै उपकरणहरू समर्थन गर्दछ
: द्रुत भुक्तान
: तत्काल निक्षेप
2 नि: शुल्क डेमो खाता
: सबै उपकरणहरूमा उपलब्ध छ
: १०१ ट्रेडिंग टूल्स
: डेमो खाता उपलब्ध छ
: ट्रेडिंग सिग्नलहरू उपलब्ध छन्
: २//24 समर्थन
: ट्रेडि Community समुदाय
* * जोखिम चेतावनी: विदेशी मुद्रा र CFD व्यापार तपाईंको लगानी पूंजी को लागी महत्वपूर्ण जोखिम शामिल छ।
3 १००% जम्मा को लागि बोनस रेजिष्ट्रेसनको समय भित्र
१०० भन्दा बढी सम्पत्ति
: सामाजिक व्यापार
: प्राविधिक विश्लेषण उपकरणहरू
: कुनै पनि उपकरणमा छिटो र कुशल
: व्यापार मा तत्काल पहुँच
* * जोखिम चेतावनी: विकल्प ट्रेडिंगले तपाईंको लगानी गरिएको पूंजीको लागि महत्त्वपूर्ण जोखिम समावेश गर्दछ।
हामी क्युरेटेड फोरेक्स सामग्री र निश्चित समय ट्रेडिंग ट्रेडिंगको बारेमा सबै प्रश्नहरूको लागि तपाईंको सम्पर्कको पहिलो बिन्दु बन्न चाहन्छौं। यसैले तपाईं हाम्रो साइटमा सबै भन्दा राम्रो ट्रेडिंग ब्रोकरहरूको शीर्ष सूची मात्र फेला पार्नुहुनेछ तर सबै भन्दा लोकप्रिय अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्महरू, व्यापार रणनीतिहरू, र भिडियोहरूको लागि सुझावहरू र युक्तिहरू पनि।
हामी तपाईंलाई बताउछौं कि कुन सम्मानित ब्रोकरहरू तपाईं उनीहरूको डेमो खाताहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, कसरी वास्तविक पैसाको साथ व्यापार गर्ने र कसरी मुनाफा कमाउने र कुन भुक्तानी विधिहरू अनलाईन ट्रेडिंगको लागि विशेष उपयुक्त छ।
नयाँ ट्रेडिंग प्लेटफार्महरू 2020
हाम्रो अफरलाई सकेसम्म अद्यावधिक राख्न हामी सधैं नयाँ ट्रेडिंग प्लेटफर्महरू खोजिरहेका छौं। हामीसँग तपाईं लामो-स्थापित प्रदायकहरू मात्र पाउनुहुने छैन, तर उत्तम नयाँ अनलाइन पनि पाउनुहुनेछ व्यापार तपाईंको देशको लागि प्लेटफार्महरू।
यी ब्रोकर प्लेटफर्महरूमा केवल नि: शुल्क शैक्षिक सामग्रीहरू तपाईंलाई पर्खंदैनन्, तर रमाईलो बोनस, लगातार प्रोमोहरू र धेरै तरीकाले पैसा ट्रेडिंग पनि गर्छन्। अवश्य पनि, हामी सँधै यो कुरा सुनिश्चित गर्दछौं कि तिनीहरू प्रतिष्ठित ब्रोकरहरू हुन् र कि उनीहरू उचित व्यवहारका लागि विनियमित छन्। किनकि यसको सामना गरौं। २०२० का लागि प्रत्येक नयाँ अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्मले हामीलाई हाम्रो मापदण्डहरू पूरा नगरीकन यहाँ ल्याउन विश्वस्त पार्न सक्दैन। र यो यो कसरी हुनुपर्दछ, आखिरमा, यो तपाईंको पैसाको बारेमा जति छ हाम्रो ईमानदारीको बारेमा हो।
त्यसोभए यदि तपाई २०२० मा सबै भन्दा राम्रो अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्म खोज्दै हुनुहुन्छ भने जुनमा तपाईले त्यसलाई फेला पार्ने ग्यारेन्टी पाउनुहुन्छ। हाम्रा प्रस्तावहरू सधैं अपडेट रहन्छन्।
शीर्ष बोनस प्रस्ताव उत्तमको लागिलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्मों
अनलाइन ट्रेडिंग रमाईलो छ जब तपाईं लाभदायक बोनस प्रस्तावहरूको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ असंख्य बिभिन्न प्रकार र प्रस्तावहरू छन् जुन बिभिन्न ट्रेडिंग अवस्थाको लागि उपयुक्त छ।
हामी तपाईका लागि सकेसम्म धेरै बिभिन्न बोनसहरू संकलन गर्न निश्चित गर्दछौं। हाम्रो राम्रो सम्पर्क को लागी धन्यवाद, तपाईले अनन्य बोनस प्रस्ताव पनि पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले कहि इन्टरनेटमा फेला पार्नुहुने छैन। उदाहरण हाम्रो वेबसाइटको लागि एक्सएम फोरेक्स १००% बोनस।
हामी तपाईंलाई यहाँ बिभिन्न विकल्पहरूको बारेमा जानकारी दिन खुशी छौं। के तपाई $, 5000०० सम्मको निक्षेप बोनस खोज्दै हुनुहुन्छ वा बोनस बिना तपाई केवल व्यापार गर्नुहुन्छ?
हामीसँग प्रत्येक व्यापारीको लागि केहि छ।
ट्रेडिंगका लागि उत्तम डेमो खाताहरू
जब तपाइँ एक अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्मको लागि साइन अप गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको जोखिम मुक्त ट्रेडिंग अभ्यास को सुविधा को लागी एक डेमो खाता प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईले रोज्नु भएको ब्रोकरमा निर्भरता, तपाई $ १,००० र $ १०,००० बीचको डेमो खाता सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, जब एक नयाँ के रूप मा तपाईं व्यापार र आफ्नो डेमो खाता ड्रेन, तपाईं यो मूल ब्यालेन्समा सित्तैमा फेरि भर्न सक्नुहुनेछ।
हामीले २०२० को डेमो खाताहरूसँग अफ्रिकी र एशियनका लागि काम गर्न सजिलोसँग उत्तम ट्रेडिंग खाताहरू कम्पाइल गरेका छौं Tradeआरएस थप रूपमा, केहि ब्रोकरहरूले १००% ट्रेडिंग बोनस प्रदान गर्दछ जब तपाईले दर्ता गरेको पहिलो घण्टामा तपाईको पहिलो जम्मा पैसा बनाउँदछ।
सर्वश्रेष्ठ अनलाइन व्यापार Deposit Bonus Offers २०२०
निक्षेप बोनसको साथ, तपाईंको क्रेडिट तपाईंको अनलाइन ब्रोकर प्लेटफर्मले लेबल प्रतिशतले गुणा गर्दछ। तपाईं त्यसपछि बोनस पैसा तपाईंको इच्छा अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, व्यापार, अधिक पैसा कमाउन, र तपाईंको नाफाबाट उत्पन्न कोष निकाल्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको छनौट सजिलो बनाउन बोनस प्रतिशतको आधारमा हामीले उत्तम जम्मा बोनस प्रस्तावहरू राख्यौं। तपाईंलाई उत्तम सूट बोनस छनौट गर्नुहोस्। के तपाई उच्च प्रतिशत चाहानुहुन्छ वा ठूलो बोनस रकम तपाईलाई बढी महत्त्वपूर्ण छ?
१००% बोनसको साथ जम्मा बोनस FTD का लागि।
यो बोनस प्रकार पहिलो पटक जम्मा को लागी हो र यदि तपाइँ दर्ता को पहिलो घण्टा भित्र आफ्नो पहिलो जम्मा गरे भने यो जारी हुन्छ। Olymp Trade यो छ, Expert Option यो सूचीमा सबै अन्य ब्रोकरहरू छन्।
न्यूनतम निक्षेपको साथ जम्मा बोनस प्रस्ताव
अवश्य पनि, यो हामीलाई स्पष्ट छ कि सबैजना ठूलो बोनसको लागि लक्षित छैनन्। कहिलेकाँही सानो बोनस मात्र राम्रो हुन्छ, खास गरी यदि तपाईं एक पटक मात्र एक प्रदायक प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने। यी मामिलाहरूको लागि, हामीले न्यूनतम निक्षेपहरूको साथ अनलाइन ट्रेडिंग बोनसको साथ एक छुट्टै पृष्ठ सिर्जना गरेका छौं। त्यसोभए तपाईं थोरै पैसाको लागि ठूलो बोनस प्रस्तावहरू सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ। १० डलर जति छ।
सबै भन्दा राम्रो कुनै जम्मा छैन व्यापार बोनस २०२० प्रदान गर्दछ
के यो अझै तपाईका लागि धेरै नै छ? के तपाई चाहानुहुन्छ कुनै जम्मा ट्रेडिंग बोनस छैन? समस्या छैन! हामीले तपाईंको लागि सबै भन्दा राम्रो निःशुल्क बोनस प्रस्ताव २०2020 भेट्टाएका छौं।
यी प्रस्तावहरूको साथ तपाईं केवल हाम्रो लिंक पछ्याउनुपर्दछ, अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्ममा दर्ता गर्नुहोस् र तपाईं आफ्नो नि: शुल्क कुनै जम्मा ट्रेडिंग बोनस प्राप्त गर्नुहुनेछ। सिक्का हराउने जोखिमबिना वास्तविक बजार सर्तहरूमा कसरी ट्रेड गर्ने जान्नको लागि यी बोनसहरू प्रयोग गर्नुहोस्। उत्तम कुरा, तपाईं यी बोनसहरू बन्द पैसा फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
: चरणबद्ध चरण ट्यूटोरियल र लेख
: तनाव फैलिन्छ
: सुपरफास्ट व्यापार कार्यान्वयन
: हाई-टेक फोरेक्स ट्रेडिंग टूल्स
* * जोखिम चेतावनी: विदेशी मुद्रा र CFD व्यापार तपाईंको लगानी पूंजी को लागी एक महत्वपूर्ण जोखिम शामिल छ।
अनलाइन व्यापार बोनस प्रोमो कोड
केही प्रदायकहरूले तपाइँलाई बोनस कोड प्रविष्ट गर्न आवश्यक हुन्छ बोनस प्राप्त गर्न जम्मा गर्दा। तपाईले पाठ्यक्रम पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोमो कोडको साथ उत्तम बोनस प्रस्तावहरू.
नवीनतम, विशेष बोनस कोडहरू प्राप्त गर्न हामीसँग नियमित रूपमा फेरि जाँच गर्नुहोस्।
दलाल नियम र लाइसेन्स
बोनस प्रस्ताव र डेमो खाताहरू उत्कृष्ट छन्, तर तिनीहरू व्यावहारिक रूपमा बेकम्मा छन् यदि तपाईं आफ्नो पैसाको साथ प्रदायकलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न।
हामी सुरक्षा र हामीद्वारा सिफारिस गरिएका दलालहरूको गम्भीरतालाई ठूलो महत्त्व दिन्छौं। हाम्रो परीक्षण रिपोर्टहरूमा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा यसैले सँधै अनलाइन ट्रेडिंग लाइसेन्स हो। प्रत्येक ब्रोकर हाम्रो ध्यान को लागी नियमित र इजाजतपत्र हुनु पर्छ।
यहाँ सबै इजाजतपत्र उस्तै अर्थपूर्ण हुँदैन। त्यहाँ केही नियामकहरू छन् जुन हामीले असुरक्षितको रूपमा वर्गीकृत गर्नुपर्दछ किनभने तिनीहरूले तिनीहरूको इजाजतपत्रहरू नियन्त्रण गर्दैनन्, वा केवल अपर्याप्त रूपमा गर्छन्।
अर्कोतर्फ, त्यहाँ साँच्चिकै गम्भीर ब्रोकर रेगुलेटरहरू छन् जसले आफ्ना कार्यहरू अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिन्छन् र यसैले सुरक्षित र उत्तम ट्रेडिंग सम्भव अनुभवको ग्यारेन्टी गर्न सक्छन्।
हामी विशेष गरी सिफारिश गर्दछौं:
माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण (एमएफएसए) माल्टामा।
Finanstilsynet (एफएसए) डेनमार्क,
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (सीएमभीएम) पोर्तुगलमा
Autorité डेस मार्च फाइनान्सर्स (AMF) फ्रान्समा
Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) स्पेनमा
वित्तीय बजार प्राधिकरण (एफएमए) अस्ट्रियामा
Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (बाफिन) जर्मनीमा
स्विस वित्तीय बजार पर्यवेक्षण प्राधिकरण (FINMA) स्विजरल्याण्ड मा
वित्तीय आचरण प्राधिकरण (विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ)। बेलायत।
राष्ट्रिय फ्यूचर एसोसिएशन (NFA) संयुक्त राज्य अमेरिका
कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) संयुक्त राज्य अमेरिका
अष्ट्रेलियाली सुरक्षा र लगानी आयोग (ASIC) अस्ट्रेलिया
वित्तीय क्षेत्र आचरण प्राधिकरण (FSCA) दक्षिण अफ्रिका
ठूला बजार प्राधिकरण (सीएमए) केन्या
अनलाइनका लागि उत्तम भुक्तान विधिहरू व्यापार
यदि तपाईं वास्तविक पैसाको साथ व्यापार गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई स्पष्ट रूपमा सुरक्षित अनलाइन जम्मा गर्न र निकाल्न आवश्यक छ।
कुनै पनि अनलाइन ब्रोकर जसले आत्मसम्मान राख्छ यसले व्यापारीहरूलाई विभिन्न सुविधाजनक र सुरक्षित पेश गरेर पैसा जम्मा गर्न यथासक्दो सजिलो बनाउँछ भुक्तानी विधिहरू। यदि तपाईं केहि निश्चित भुक्तानी विधि रुचाउनुहुन्छ भने, त्यहाँ एक शीर्ष विदेशी मुद्रा वा FTT दलाल पत्ता लगाउन को लागी ग्यारेन्टी छ कि यसलाई स्वीकार्दछ।
त्यहाँ सायद एक विदेशी मुद्रा वा विकल्प दलाल जहाँ तपाईं आफ्नो मास्टरकार्ड वा भिसा क्रेडिट कार्ड संग जम्मा गर्न सक्नुहुन्न। क्रेडिट कार्डहरू सरल छन् र अनलाइन भुक्तानी गर्दा दुरुपयोग विरुद्ध राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्दछ। एक सम्मानित विदेशी मुद्रा दलाल संग, तपाइँको क्रेडिट कार्ड जानकारी पनि पूर्ण सुरक्षित छ।
ई-वालेटहरू विशेष अनलाइन भुक्तानीको लागि डिजाइन गरिएको हो र पैसा पठाउन, प्राप्त गर्न, र पैसा अनलाइन प्रबन्ध गर्ने उत्तम तरिका हो। केवल एक चीज तपाईलाई इ-वालेट खाताको लागि चाहानुहुन्छ ईमेल ठेगाना।
प्रदायकहरू जस्तै Neteller र Skrill लगभग सबै ट्रेडिंग प्लेटफर्मले स्वीकार गर्दछ। यसको विपरित, PayPal जम्मा विधि दुर्भाग्यवस ट्रेडिंगमा धेरै दुर्लभ भएको छ। जे होस्, यदि तपाईं अझै आफ्नो e-वालेट खाता मा क्रेडिट छ र यो व्यापार को लागी प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं निश्चित रूप Joon अनलाइन मा एक उपयुक्त दलाल पाउन सक्नुहुन्छ।
मोबाइल भुक्तान अनुप्रयोगहरू
अधिक र अधिक अफ्रिकी Tradeआरएस (विशेष गरी पूर्वी अफ्रिकामा) उनीहरूको सेल फोनमा व्यापार गर्न रुचाउँछन्। मोबाइल भुक्तान विकल्पहरू जस्तै म्पेसा, निश्चित रूपमा उपयोगी छन् किनभने तपाईले आफ्नो क्रेडिट कार्ड वा तपाईको आफ्नै बैंक जानकारी खोज्नुपर्दैन जब तपाई जम्मा पैसा लिन चाहानुहुन्छ।
तत्काल बैंकिंग विशेष अनलाइन भुक्तानीको लागि विकसित गरिएको थियो। सिद्धान्तमा, यो एक अनलाइन बैंक स्थानान्तरण हो, तर कुनै पर्खिने समय बिना।
तपाईंलाई नयाँ प्रयोगकर्ता खाता वा नयाँ कार्ड आवश्यक पर्दैन र तपाईंलाई अतिरिक्त पासवर्ड पनि बिर्सनु हुँदैन। केवल तत्काल तपाईलाई तत्काल बैंकि forको लागि आवाश्यक हुन्छ एक सहभागी बैंकको साथ एक अनलाइन बैंक खाता।
इन्डोनेसियामा, उदाहरण को लागी, तपाइँ एशिया मा तपाइँको ट्रेडिंग खाता कोष गर्न बाउलांग इन्टर्नेट बैंकिंग विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरक्षित र सम्मानित अनलाइन ब्रोकर
हामीले दलाललाई सिफारिस गर्नु भन्दा पहिले यो हामीद्वारा राम्ररी जाँच गरिनेछ। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि हामी केवल एक मात्र सिफारिश गर्दछौं तपाइँको लागि सुरक्षित र सम्मानित ट्रेडिंग प्लेटफर्म। तपाईंको सुरक्षा जहिले पनि हाम्रो प्राथमिकता हुन्छ। जे भए पनि, निष्पक्ष ब्रोकरको चयन जुवा खेल्नको लागि केही हुनु हुँदैन।
हामी प्रत्येक ब्रोकरलाई परीक्षणको माध्यम बाट राख्छौं। केवल यदि तिनीहरूले हामीलाई सुरक्षा परीक्षणमा सबै बिन्दुहरूमा समझाउन सक्छन् भने हामी तिनीहरूलाई सबै विचार गर्नेछौं। हामी शंकास्पद प्रदायकहरूलाई तुरून्त क्रमबद्ध गर्दछौं जुन हामी विश्वास गर्न सक्दैनौं।
त्यसैले प्रत्येक वास्तविक पैसा ब्रोकर प्लेटफर्ममा यी चीजहरू हुनुपर्दछ:
तिनीहरूले व्यापार मा संलग्न जोखिम को ग्राहकहरु लाई चेतावनी दिनु पर्छ।
तिनीहरूको मूल्य प्रदर्शन गर्नुहोस्।
ग्राहकहरु प्रति इमानदारीपूर्वक कार्य गर्नुहोस्।
तिनीहरू भविष्यका ग्राहकको ज्ञान र उनीहरूसँग व्यापार गर्नु अघि जोखिमको मूल्यांकन गर्छन् (एमआईएफआईडीद्वारा सिफारिस गरिएको द्वितीय).
तिनीहरू तपाईंको ग्राहकलाई चिन्दछन् (KYC) र एन्टी मनी लाउन्डरिंग (AML) प्रक्रियाहरू।
तपाईं यी विचारहरू आफैं स्पष्ट छन् भन्ने सोच्न सक्नुहुन्छ, तर दुर्भाग्यवस, हामी बारम्बार हाम्रो अनुसन्धानमा दलालहरू भेट्दछौं जुन यस बारे निश्चित छैन। अवश्य पनि, यी कालो भेडाहरूसँग हाम्रो शीर्ष सूचीमा ठाउँ पाउने सम्भावना छैन।
१०००+ ट्रेडिंग उपकरणहरू
: ०..0.6 पिप्स ०..0.6 पिप सम्म कम
: 888 1: १ लाभ
Bon 5,000 सम्म बोनस
: इजाजतपत्र प्राप्त र नियमित
: विश्वव्यापी रूपमा प्रख्यात
१००% निक्षेप बोनस - जूनलाई विशेष - मान्यता st१ मे २०२०
१२ ट्रेडिंग प्लेटफार्महरू
: Account खाता प्रकारहरू
: १+०+ ट्रेडिंग प्लेटफार्महरू
: १++ कोष विधि
100% क्रडिट बोनस
जून अनलाइन बारे
जून अनलाइन इन्टरनेटमा पाइने लगानीका अवसरहरूको लागि एक सूचना प्लेटफर्म हो। हामी हाम्रा पाठकहरूलाई सामान्य व्यक्तिगत वित्त शीर्षकको वरिपरि राम्ररी अनुसन्धान गरिएका पोस्टहरू प्रस्ताव गर्दछौं।
हालसालै, यद्यपि हाम्रो फोकस विकल्पहरू (डिजिटल र बाइनरी) र फोरेक्स ट्रेडिंगमा सारिएको छ।
हामीले ईन्टरनेटमा उत्तम विकल्प ब्रोकरहरूको समीक्षा गर्‍यौं र हाम्रा कुञ्जी शब्दहरूको लागि वर्गीकरण गर्‍यौं। हामी अझै फ्युचर्स, CFDs, र सूचिकरण प्रस्ताव गर्ने अधिक दलाल समीक्षा गर्न बाँकी छौं।
तर ट्रेडिंगको बारेमा ब्लगिंग हाम्रो मात्र विशेषता छैन; हामी पनि अन्य व्यक्तिगत वित्त विषयहरु लाई पनि कभर गर्दछौं।
कसरी अनलाइन पैसा बनाउने - हामी हाम्रा पाठकहरूलाई केहि सब भन्दा राम्रो देखाउँदछौं र भुक्तान गर्दै स्वतन्त्र अवसरहरू अनलाइन
कसरी द्रुत getणहरू पाउने - हामी हाम्रो प्लेटफर्म प्रयोग गर्दछौं हाम्रो आगन्तुकहरूलाई सबै भन्दा बढि कानूनी र किफायती ndणदाताको दिशामा।
अन्य समय जे भए पनि, हामी बजेट, बैंकिंग, बीमा, धितो, सम्पत्ति योजना, सेवानिवृत्ति योजना, र कर योजनामा ​​स्टार्टअपहरूको बारेमा लेख्छौं।
र हामीलाई यो गर्न मन पर्छ।
जून जून १, २०१ 1 द्वारा स्थापित भयो केन ओमोलो।
एक मार्केटर जसले industry बर्ष वित्त उद्योगमा क्यारियर निर्माणमा बिताए - केवल आशा गुमाउनको लागि पुरै समय दोस्रो पटक निरर्थक घोषित भएपछि रोजगार।
केन र उसको टोलीले यस ब्लगबाट नि: शुल्क साना व्यवसाय परामर्श सेवाहरू दिएर र ब्रोकर प्लेटफर्महरू समीक्षा गरेर एक व्यावहारिक व्यवसाय गरेका छन्।
हामी एशिया र अफ्रिकामा बलियो उपस्थितिको साथ ब्रोकर प्लेटफर्महरू परीक्षण गर्दछौं, समीक्षा लेख्छौं, र जानकारीपूर्ण पृष्ठहरू लेख्छौं ताकि अरूसँग हाम्रो अनुभवको सम्पत्ती साझा गर्न सक्दछन्।
यो सबैको समन्वय एक पूर्ण-समय कार्य हो, जुन जुन अनलाइन मल्ल टोली द्वारा ह्यान्डल गरिएको छ।
सधैं जस्तो, हामी उत्तम अनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफर्म तुलना पोर्टल सिर्जना गर्न कोसिस गर्दछौं जुन कहिल्यै एशिया र अफ्रिकामा कहिल्यै देखिएको छैन।
मेरो आशा हो कि तपाईं हाम्रो रिब्रेन्डेड साइट, हाम्रो प्रस्तावहरू मनपराउनुहुनेछ र तपाईं हाम्रो साथमा उत्तम फोरेक्स र विकल्प दलालहरू फेला पार्नुहुनेछ। अनौंठो बोनस प्रस्ताव लिनुहोस् र सबैभन्दा उत्साहजनक अनलाइन ट्रेडिंग अनुभवको आनन्द लिनुहोस्।
शीर्ष दलालहरू जसले म्पासा स्वीकार्छन्।
खुशीको व्यापार। केन।
कसरी आफैंको पैसा बेच्ने फोटोहरु बनाउन सेप्टेम्बर 21, 2020
२०२० मा कसरी छिटो पैसा कमाउने सेप्टेम्बर 20, 2020
कसरी Trade नैरोबी स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) मा। सेप्टेम्बर 16, 2020
केन्यामा कसरी पैसा कमाउने बिट्स बनाउने सेप्टेम्बर 16, 2020
केन्यामा टिकटोकमा पैसा कसरी कमाउने सेप्टेम्बर 16, 2020
केन्यामा पैसा प्रोग्रामिंग कसरी गर्ने सेप्टेम्बर 16, 2020
रुचाइएको ट्रेडिंग साइट।
केन्यामा कसरी पैसा कमाउने बिट्स बनाउने
केन्यामा टिकटोकमा पैसा कसरी कमाउने
ग्रीवा क्यान्सर | यो पोस्ट पढिसकेपछि तपाईं एक साथीमा टाँसिनुहुनेछ
केन्या सहस्राब्दीहरूका लागि १ Small साना व्यवसाय विचार - २०२०
एक्सपोनेन्सिअल मूभिंग एभरेज (EMA) को उपयोग गर्दै ट्रेन्डहरू रोज्नुहोस् Olymp Trade
Expert Option ट्यूटोरियल
सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफार्महरू “दलालहरू” इन्डोनासियामा
केन्यामा सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग प्लेटफार्महरू "दलालहरू"
प्रतिलिपि अधिकार © 2020 जून अनलाइन, सबै अधिकार सुरक्षित
साइट ब्राउज गर्न जारी राखेर तपाईं हामीसँग सहमत हुनुहुन्छ कुकीहरूको प्रयोग.